Hindiya: Navjot Singh Sidhu Oo Ku Dhawaaqday Modi "Hadal Dheer" oo sheegay inaanuu Haysin Ballantiisii ​​| India News - TELES RELAY
ACCUEIL » International Hindiya: Navjot Singh Sidhu Oo Ku Dhawaaqday Modi "Daar Cirka Leh" India News
Hindiya: Navjot Singh Sidhu Oo Ku Dhawaaqday Modi "Hadal Dheer" oo sheegay inaanuu Haysin Ballantiisii ​​| India News
SHIMLA / HIMACHAL PRADESH: Wasiirka Punjab Navjot Singh Sidhu Arbacada ayaa ugu yeeray Ra'iisul Wasaaraha Narendra Modi ah "beenaale ugu weyn", isagoo ku eedeeyey in weydaan ballamo doorashada ay. -Siyaasi cricket-jeestay kii kooban joojiyay by guddiga doorashada si ay u ololeeyaan hore, sidoo kale loo yaqaan Modi "Feku No. 1" oo ku talinaya in ra'iisul-wasaaraha ka dhigaysa kibir madhan.
"Modi ayaa ka hadlaya Hindutva laakiin ma ixtiraamo mabaadii'da," ayuu yiri intii lagu jiray dhacdo doorasho oo ku taal Bilaspur, degmada Hamirpur Lok Sabha.
"Hooyaday waxay ahayd a Kshatriya . Waxay tiri: Raghukul reet sada chali aayi, pran jaye by vachan na jaye (mid waa inuu ilaaliyaa balanqaadkii xitaa kharashka dhimashada). Laakiin ma fulin waajibaadkiisa inta badan ballan-qaadyadii 342 ee doorashadii ugu dambaysay, "ayuu yiri.
Isla mar ahaantaana, Wasiirka Shaqaalaha Smriti Irani weeraray hogaamiyaha ka mid ah Congress, Rahul Gandhi at bax ka dhacay Palampur in doorashada Kangra, oo sheegaya, "Rahul Gandhi ma jirtaa cudur daar erayadii uu Galliani Sam Pitroda uu hadalka ku saabsan rabshadihii anti-Sikh. "
Smriti Irani waxay sidoo kale garaacday Congress-ka Trinamool (TMC) sababaha rabshadaha intii lagu jiray bandhiga socdaalka ee madaxweynaha BJP Amit Shah oo ku taal Kolkata Talaadadii.
"Codkaaga ayaa sidoo kale u oggolaan doona Modi inuu baabi'iyo murugada TMC," ayay u sheegtay codbixiyayaasha.
Xildhibaanku wuxuu ku xardhay Xildhibaan Pawan Kajal oo ka soo horjeeda wasiirkii Xoghayaha Kishan Kapoor ee Kangra.
Madaxweynihii hore ee BCCI iyo ku-xigeenkii saddex jeer Anurag Thakur Dagaalka ka dhanka ah Sri Naina Devi ku-xigeenka Ram Lal Thakur ee Hamirpur.
Samee doorasho doorasho Lok Sabha oo ka socda 2019 iyo natiijooyinka 23 May oo leh TOI. Raac naga soo raac si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay, casriyeynta nool, falanqaynta wararka iyo falanqaynta xogta sare. Raac nolosha natiijooyinka doorashada isbeddellada ugu weyn iyo cusbooneysiinta ugu dhakhsaha badan maalintii maalinta tirada ee shabakadda macluumaadka ugu weyn ee India.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay: Dawladda Cameroon waxay ka shakisan tahay inay kala qaybsan yihiin maal-galinta kala-guurka ka imaanaya dalalka ay mudnaanta siinayaan dhibaatooyinka bani-aadamnimada ee dalka
Dalka Mareykanka, "Doorashadii Donald Trump waa la soo tuuray ilmo iska soo ridid"